Gaa Green: 5zọ XNUMX Kwụsị Iji CD na DVD | Martech Zone
Dabere na EPA, a na-atụgharị CDs dị nde 5.5, ngwugwu ha na ọtụtụ CD ndị ọzọ na-egwu egwu kwa afọ na-ejegharị. CD na DVD sitere na Aluminom, Gold, Dyes, ihe ndi ozo di iche-ma kariri ihe niile Polycarbonate na Lacquer. Polycarbonate na Lacquer na-eme site na mmanụ.
The stats na-aga n'ihu, kwa ọnwa 100,000 pound nke CD na DVD na-apụ n'anya. Enweghi uzo di nma iji megharia ihe ndi ahu! Dị ka Industrylọ ọrụ mmanụ n'onwe ya, ihe dịka galọn 1.1 nke mmanụ ọ bụla (galọn 42) nke mmanụ na-aga na petrochemicals.
Echere m na ọ na-aga n'ekwughị, yabụ, na ịgbanwere igwe ojii na-agbakọ sava emebere na ịdenye aha Software dị ka ngwa Ọrụ nwere ike inyere gburugburu ebe obibi aka n'ezie. Amaghị m pasent ole nke gbọmgbọm mmanụ na-abanye na diski kọmpat, mana n'ezie, anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma karịa site na iji draịva USB na netwọkụ maka ịkekọrịta faịlụ kama ịkụ ọkụ ọkụ.
Na mgbakwunye na eji diski, enweghị m ike ịre mana eche na enwere ike dị ukwuu na-enweghị isi iji rụpụta ma bufee diski ndị ahụ. O doro anya na ịgbanye bandwid maka plastik ga-eweta nsonaazụ dị mma maka ụmụ mmadụ, ọ dị mma? Aghọtara m na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke ahụ na-arụ ọrụ ka ukwuu, mana gịnị kpatara na ọ nweghị onye na-ekwu maka ụlọ ọrụ a na-enweghị isi?
M na-eche ihe mere eji Software dị ka a Service abụghị ihe dị mkpa nke Na-aga Green nye ndị ahịa ndụmọdụ? Terabyte ike draịva, USB draịva, Online Backups… niile ndị a na-adị mfe inweta ka onye ọ bụla iji. Ọ dịghị onye kwesịrị ịzụ CD na DVD ọzọ. Enwekwaghị m ịgbazite ihe nkiri na DVD, ana m agbazite ha na m AppleTV!
5 Ebumnuche iji gbochie gị ị Addụ ọgwụ CD gị
Gbanwee na Sọftụwia dị ka Ọrụ. Ihe Nlereanya: Gbanyụọ Microsoft Office maka Google Apps na Microsoft CRM maka Salesforce. Enweghị nrụnye, enweghị nkwado ndabere, enweghị ngwaike… naanị ihe nchọgharị!
Gbanwee site na ịgbazite DVD na ịzụta CD CD na nbudata ịzụta Music gị ma ọ bụ mgbazinye Movie na iTunes, AppleTV na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa. iTunes nwere ike ichegharị akara ngosi ha!
Gbanwee site na nkwado na ịbuga data na CD na DVD gaa na USB Drive. USB draịva jidere karịa data ma na-ebugharị, ọsọ ọsọ, na-adịghị nká. (Kpachara anya n'agbanyeghị na ọ bụghị ihe niile USB draịva na-kere ka hà!) Zụrụ onwe gị nnukwu obere draịva maka ịkwado ọrụ gị na ibuga ya azụ na-arụ ọrụ. Anaghị m aga ebe ọ bụla na-enweghị nke m Paspọtụ Digital Western, ọ bụ ihe kasị mma ego m na mgbe mere!
Nyefee nnukwu faịlụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ site na ndị na-ere ahịa SaaS dị ka Ntughari, NwXNUMXI, Zipu, MailBigFile, na SendSpace.
Bibie CD na DVD gị. Mgbe ị nyere iwu maka laptọọpụ gị ọzọ, etinyela otu na nzụta. Mgbe ị nyere ha iwu maka ọfịs gị, chekwaa ego ma zụta draịva USB kama ị nweta nkwalite gị onye edemede DVD. Site na ịghara inweta ha, o yikarịrị ka ị ga-aga gbaa CD ahụ na-esote ọkụ!
N'ezie, naanị ihe mere m ji eji CD ọzọ bụ maka akwụkwọ dị na CD ma ọ bụ gbaa ọkụ maka ụgbọala m na-aga na site na ọrụ. Anọ m na-elele ọnụahịa, agbanyeghị, enwere m ike ịnweta stere nke ụgbọ ala nke nwere ntinye USB yana njikwa iPod maka ihe na-erughị $ 200! Enwere ike oge eruola ka m mee njem!
Aug 28, 2008 na 1:07 PM
Nwoke, amaghi m ole anyi nile ji CD na DVD ruo mgbe m guru post gi. Agbanyeghi na m nwere nganga kwuo na emeworị m #s 1, 3 na 4 na ndepụta gị!